Remarks by President Obama and Daw Aung San Suu Kyi of Burma in Joint Press Conference | November 14, 2014 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » Remarks by President Obama and Daw Aung San Suu Kyi of Burma in Joint Press Conference | November 14, 2014
Posted by kai on Nov 15, 2014 in Editor's Choice, Press Announcements |4comments
12:35 P.M. MMT
သူကြီး အကျင့်ပုတ်ပြီ…. :cryy:
မပြုံး အမြန်လာပါ …….
အရီးရောက်ရာအရပ်က အမြန်လာပါ ….
စိန်ရတုမှ အမေးအဖြေများလဲ လိုချင်ပါတယ်…
အိုဘားမားကိုမေးတဲ့.. မေးခွန်းထဲလည်း.. ဂျာနယ်လစ်အကြောင်းပါတယ်..။
လောလောလတ်လတ်.. လပိုင်းကပဲ.. အမေရိကားက..အမေရိကန်ဂျာနယ်လစ်၂ယောက်. ISIS တွေခေါင်းဖြတ်သတ်တာခံထားရတယ်..။
ဒီလိုအချိန်မယ်.. ကိုပါကြီးအမှု.. အိုဘားမားသွားတိုက်တွန်းခိုင်းတော့… တော်တော်ဂွကျသပေါ့…။
အိုဘားမားကိုယ်တိုင်က.. အမေရိကခိုးဝင်နေတဲ့သူလူ၅သန်းလောက်ကို.. အမေရိကန်ဖြစ်ဖို့အတွက်.. ပေးပစ်ဖို့လုပ်နေတာ…
အဲဒီကိစ္စ.. ကွန်ဂရက်နဲ့.. စိနိတ်နဲ့ အတိုက်အခံအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတာ….။
ဘင်္ဂလီဆိုတာ.. ခိုးဝင်လာတာပါ..။ မြန်မာပြည်ထဲ.. မလိုပါဘူးသွားပြောလည်း.. ဂွကျတဲ့အဖြေပဲထွက်လာမှာပဲ..။
ကောင်းတာက.. မြစ်ဆုံကိစ္စကို.. ယူအက်စ်က၀င်လုပ်ပေးခိုင်းတာမျိုး.။
သီလ၀ါ..။ ထားဝယ်ရေနက်ကိစ္စတွေ.. ကိုကိုးကျွန်းလိုကိစ္စတွေ..မှာ .. ယူအက်စ်ကို.. ရင်းနှီးမြုပ်နှံခိုင်းတာမျိုးဖြစ်ရမယ်ထင်မိတယ်…။
စိန့်တိုင်းပြည်နဲ့.. ယူအက်စ်အားပြိုင်မှာမို့.. အကုန်ရကုန်နိုင်တယ်..။
ခုတော့.. အချင်းချင်း.. ချ.. ချ.. ချ… နဲ့.. အပြင်ကဆွမ်းကြီးအချောင်လောင်းသွား…။
စိနပြည်နဲ့ကတော့.. စာချုပ်တွေတော်တော်များများ.. ဦးသိန်းစိန်တို့ချုပ်လိုက်ပုံရသား..။
အနည်းဆုံးတော့.. ပိုးလမ်းမကြီးအသက်ဝင်လာတော့မယ်…. ထင်..။
ရွာထဲ အဝင် မပုတင် ပျောက်။
မနေ့က သူကြီးမင်း ကူလို့ ရပေမဲ့ ရွာထဲ နေ့အဝင် ယာဉ် နဲ့ ညအဝင် ယာဉ် မတူတာ မို့ ညဘက် ဝင်လို့ မရပြန်တော့။
နံပါတ်ကုဒ် ကိုလဲ ရေးမမှတ် ခဲ့ လို့ ရမ်းတီးတာမှား။
အခုထပ်စမ်းရင်း ရသွားသမို့ ပိုင်ရာဆိုင်ရာ ကို အပူကပ်ဖို့ မလိုတော့ တော်သေး။
Password မေ့ရင် ကွကိုယ် ဘာလို့ ပြန်ဖော်လို့မရလဲ သူကြီးရဲ့။
script လေးအတွက် အထူးဘဲ ကျေးဇူးပါ သူကြီးမင်း။
မနေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောသွားတဲ့ အထဲ မယ်
So let us not exaggerate the differences and the difficulties. But at the same time, let us not exaggerate the rosy picture either.
What we need isahealthy balance between optimism and pessimism. We need to view the situation for what it was.
အဲဒါလေး ကို သဘောကျ လိုက်တာ။ ကျန်တာ တွေတော့ အခု အသေးစိတ်ဖတ်ပါ့မယ်။
Mr President ရဲ့ တက္ကသိုလ်ထဲက script လေးများရော မရနိုင်ဘူးလား သူကြီး။
ငုတ်မိသဲတိုင် တက်နိုင်ဖျားရောက် ကတော့ ရာဇဝင်တွင်ခဲ့ပြီ။
အမေရိကန် ကို အမေရိက ခေါ်ဖို့ စိတ်ပါမှ သူကြီး နဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်တော့မယ်။